Afganistàna: Nohelohina Ho Faty Fa Nizara Lahatsoratra Avy Taminà Bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Afganistàna: Nohelohina Ho Faty Fa Nizara Lahatsoratra Avy Taminà Bilaogy
Voadika ny 09 Jona 2017 6:12 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, عربي, 日本語, Español, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana: Lahatsoratra tamin'ny Janoary 2008)
Ny Fikambanan'ireo Afgàna Mpanoratra Bilaogy (Afghan Penlog), vondrom-piarahamonina iray natsangan'ny andianà bilaogera Afgàna mpikatroka, dia nilaza ny tebitebiny lalina momba ilay tanora bilaogera sady mpanao gazety, Sayed Parwiz Kambakhsh, izay nahazo fanamelohana ho faty avy amin'ny fitsaràna iray ao an-toerana.
Mpitatitra vaovao isankerinandro tao amin'ny Jahan-e Naw (New World) izy ary mpianatra ho mpanao gazety avy ao amin'ny anjerimanontolo Balkh.
Araka ny voalazan'ny Afghan Penlog sy ny haino aman-jery iraisampirenena, ny 27 Oktobra 2007 i Parwez Kambakhsh no nosamborin'ny manampahefana noho ny nizaràny tamin'ireo nàmany ny lahatsoratra iray izay hitany tao amin'ny tranonkala Iraniàna iray. Miresaka momba ny zon'ny vehivavy ilay izy, ny Koràny ary ny Mpaminany Mahomet. Fitsarana iray tao an-toerana, tany Mazar-e Sharif , any avaratr'i Afganistàna no nanameloka azy ho faty noho ny filazàna azy ho naniratsira fivavahana.
Ny Reporters Without Borders, mpanaramaso erantany ny resaka haino aman-jery, dia miteny fa natao maimaika ilay fitsaràna ary tsy niasàna saina momba izay lalàna na fahalalahana maneho hevitra, izay arovan'ny lalàm-panorenana.”
Ny tondron'ny Sivana milaza hoe :
Mino ireo Afgàna mpitari-pivavahana tena fatra-pifikitra amin'ny nentindrazana, izay ny ankabeazany no mbola tsy nikitika velively ny atao hoe solosaina na aterineto, fa i Kambakhsh izy tenany mihitsy no nanoratra ilay lahatsoratra ary noho izany dia voaheloka ho naniratsira fivavahana izy. Satria tsy misy sazy mazava tsara momba ny fitrohana lahatsoratra “tsy mifanaraka amin'ny finoana silamo” avy ao amin'ny aterineto, dia nangataka tamin'ireo mpitari-pivavahana ny fitsaràna ambaratonga voalohany mba haneho hevitra. Nangataka ny hampiharana ny fanamelohana ho faty ireo mpitari-pivavahana izay tsy nampanao akory fanadihadiana lalina momba ilay tranga.
Mety ho ny rahalahin'ilay mpanao gazety no nokendrena
Araka ny lazain'ny CNN, marobe no mino fa, raha ny marina, dia nosamborina noho ireo lahatsoratra nosoratan'ny rahalahiny nanakiana ireo manampahefana ao amin'ny faritra i Kambakhsh. Nanoratra tantara marobe manome antsipirihany momba ny zon'olombelona ilay rahalahiny, Sayed Yaqub Ibrahimi.
Ny 23 Janoary 2008, namoaka fanambaràna iray ny Afghan PenLog izay niampanga ireo manampahefana ho miezaka miala andraikitra amin'ilay raharaha: “… ny Ministera Afgàna misahana ny Filazambaovao sy ny Kolontsaina dia namoaka taratasy tamin'ity tolakandro ity milaza fa tsy mpanao gazety i Parwiz Kambakh ary tsy mifandray amin'ny resaka haino aman-jery mihitsy ny raharahany.” Miahiahy fatratra ny Afghan Penlog, ary mangataka ny famotsorana avy hatrany an'i Parwiz Kambakhsh.